Bu’aa ba'ii hadhaa'aa hogganummaan biyyaa keessa darbame
Bu’aa ba'ii hadhaa'aa hogganummaan biyyaa keessa darbame Featured
Finfinnee: Ummatni Oromoo jaarraa hedduuf mirgoota abbaa biyyummaa, eenyummaasaa, afaan ofiin barachuu dhabuun qe’eefi qabeenyasaarratti murteen hinbarbaachisne darbaa turuusaa seenaan ni ibsa.
Jaarraawwan hedduu darban keessas fayyadamummaan siyaas-dinagdee, akkasumas hawaasummaa Oromoon fedhu jalaa ugguramuun sirna bittoota gara garaatiin cunqursaa hadhaa'aa dabarsaa akka ture ragaalee seenaa wabeeffachuun ibsuun ni danda'ama.
Sirnoonni darban hedduun dabaree walaharkaa fuudhanii bitan kanaan aadaa, duudhaa, safuu, afaaniifi eenyummaan Oromoo akka mataasaa ol hinqabannetti ukkaamsaa kan turan yoo ta’u, fedhiifi kaayyoo ilmaan Oromoo matumaa dhabamsiisuun takkaa hindanda'amne.
Akkuma Oromoon, “Dukkanaa'us bari'uun hinoolu” jedhee mammaaku, ilmaan Oromoo sirna boquusaatti harqoota gabrummaa ta’uun isa rakkisaa jiruofirraa fonqolchuuf rafee hinbulle. Lubbuuf qabeenyasaas utuu hinmararfatiin aarsaa guddaa lubbuusaa arjoomuun calaqqee xiqqaa sirna dimokraasii ijaan arguu danda'eera.
Miseensa Koree Giddugaleessaafi Ministirri Albuudaa, Boba’aafi Gaazii Uumamaa Obbo Mootummaa Maqaasaa kabaja hundeeffama waggaa 28fa Dhaabbata Demokraasummaa Ummata Oromoo (DhDUO) sababeeffachuun miseensonni dhaabichaa sadarkaa federaalaatti jiran galma Waajjira Giddugaleessa DhDUO, magaalaa Finfinneetti argamutti marii paanaaliitiin Dilbata darbe wayita kabajan akka jedhanitti, jiraachuun Oromiyaa Itoophiyaadhaaf hundee cimaadha.
Kunis jiraachuu Itoophiyaa keessatti Oromoonni qooda olaanaafi adda duree qabaatanis, dhiibbaa sirnoota darbaniin irratti raawwataa tureen seenaan qabsoo Oromootaa ibsu akka hinbarreeffamnellee shirri xaxamaa ture tokko lama miti jedhu.
Haata’uutii, Oromoon mirgi eenyummaasaa jalaa dhokatee akka hinhafneef tattaaffii cimaafi wareegama hadhaa'aa taasiseen boquusaa ol qabachuu danda'uusaa eeruun, qabsoon mirga abbaa biyyummaa kabachiisuuf taasifamu, ammallee taasifamaa kan ta'uufi bu’aan yeroorraa yerootti galmaa'aa jiru miira ofitti amanamummaa kan nama keessatti uumu ta'uu dubbatu.
Kana jechuun hunduu walqixxaateera jechuu miti kan jedhan Obbo Mootummaan, hawaasni Oromoo sochii miira tokkummaan taasisaa jiru gabbifachuu akka malu ibsu.
Roorroo ummata Oromoo kaleessa tureefi bu’aa yeroo ammaa galmaa'aa jiru wayita walbira qabamee ilaalamu jijjiiramni jiraachuu kan dubbatan ammoo Komishinara Komishinii Paarkii Indastirii, Obbo Siisaay Gammachuuti.
Kan darbe seenaadha, ni dubbifama; kan amma galmaa'aa jiru injifannoodha ni calaqqisa; fiixaan bahinsa boruutiif mootummaa waliin hiriiruun barbaachisaadha jedhu.
Bu’aa cululuqaan yeroo ammaa galmaa'e bu’aa DhDUO qofa osoo hintaane qabsoo hawaasa bal’aa walirraa hincinneen kan argame ta'uu eeruun, fayyadamummaa gama maraan eegamu ofharkaan gahuuf karaa dimokraatawaa ta’e hiriiruun dirqama lammii hundaati jedhu.
Hacuuccaan darbe hadhaa'aadha, kun ta’us qabsoo ummata Oromoo karaatti hambisuu hindandeenye kan jedhan ammoo Ministir De'eetaa Ministeera Dubartootaafi Daa’immanii, Aadde Habiibaa Siraaji.
Oromoon gahumsaafi bilchina sammuu cimaa qabu osoo jiruu aangootti butamuu dhabuunsaa ilaalchi dogogoraan hidda gadifageeffate kan ture ta’us, oolee bulee har’a dho'uu dandaheera jedhu.
Har’a ilaalchi gadaantummaa kaleessa ture cabuusaatiin sagalee guutuufi sabootaafi sabalammiilee biyyittiin deeggarsa argachuun Oromoon ministira muummee ta’uu danda'uufi saa Doktar Abiyyi Ahmad goota Oromoorra darbee sabootaafi sablammiilee biroof hogganaa ta’uu danda'eedha jedhu.
Durataa’aan ADWUIfi Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Dr. Abiyyi Ahmad gaaffii ummata bal’aa giddugaleeffachuun ummata waliin yoo dhaabatan ijaarama Itoophiyaa haaraa ariifachiisuu kan danda'an waan ta’eef waldhaga'aa deemuun ni barbaachisa.
Torban kana/This_Week 11819
Torban darbe/This_Month 91656
Guyyaa mara/All_Days 1603614